စွယ်မက်ဖွယ်ကောက်ကြောင်း အလှတွေကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ပြည်တွင်းက အကိတ်ဆုံး CELE (၁၀) ဦး – Myanmar
September 21, 2020 admin Cele, Photo 0
ပရိတ်သ တ်ကြီးရေ ဒီတ စ်ခါတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကိတ်ဆုံး ကောက်ကြောင်း အလှတွေ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မြန်မာ့အကိ တ်ဆုံးနဲ့ နာမည်ကြီး Cele (၁၀) ဦးရဲ့ စာရင်းကိုဖော်ြ ပပေးလို က်ပါတယ်နော်….
ပရိတျသ တျကွီးကို ဘဘေီေ မာငျနဲ့ကတော့ အထူးမိတျဆ ကျပေးစရာလိုမယျ မထငျပါဘူးနောျ။ ဘဘေီမောငျကတော့ စှဲမကျဖှယျ ရာအလှတ ရားစဈတှကေို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ မငျးသမီးခြောလေးဖွဈသလို ပုရိသတှရေဲ့အားပေး ခစြျခငျမှုတှကေိုလညျးရ ရှိထားပါတယျနောျ။ အလှူအတနျးေ တှကိုလညျး ရကျရောသူ တဈဦးဖွဈလို့ ပရိတျသတျတှရေဲ့ အခစြျတှကေို ပိုငျဆိုငျထားပါေ သးတယျနောျ…
မငျးသမီးေ ခြာလေး ဆုအိမျစံ ကတော့ မွနျမာဝတျစုံလေးေ တှကိုဝတျဆ ငျတကျပွီး သူမရဲ့ စှဲမကျဖှ ယျရာ ကောကျကွောငျးအလှတှကေို ပရိသတှအေတှကျ ဖောျပွပေးလေ့ရှိပွီး ဘယျလိုပုံစံ အဝတျအစားနဲ့မဆို လိုကျဖကျလှတဲ့ ကောကျကွောငျး အလှပတှကေိုပို ငျဆိုငျထားတာပါနောျ။ အဲ့တာကွောင့ျလညျး ပုရိသတှရေဲ့ သညျးသညျးလှုပျ အားပေးဝနျးရံခွငျးတှကေို ရရှိပိုငျဆိုငျနသေူလေးပဲဖွဈပါတယျနောျ…
ပုရိသတိုင်းရဲ့ အသ ည်းကျော် အိမ်မက်နတ် သမီးလေး နန်းမွေ့စံကေ တာ့ ဒီစာရင်းရဲ့ နံပါတ် (၈)နေရကနေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။သူမကတော့ ဆက်ဆီမော်ဒယ်အဖြစ်အနုပညာလေကထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး ပုရိသတွေရဲ့ အထူးအာရုံစိုက်ဝန်းရံခြင်းကို ခံရသူလေး ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ အ ထူးသဖြင့် သူမရဲ့ လုံးဝအကြမ်း စားပုံရိပ်တွေကြောင့် ပုရိသတွေ အမြဲတမ်း အားပေးဝန်းရံခြင်းကို ခံနေရတဲ့ မော်ဒယ်မလေး ဖြစ်ပါတယ်နော်….
ဆက်ဆီမော် ဒယ်မလေး ရှင်ယွန်းမြတ်ကလည်း ပုရိသတွေရဲ့ ပါးစပ်ဖြားမှာ အထူးရေပန်းစားလှပြီး အမိုက်စားကောက်ကြောင်းအလှတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းကြောင့်လည်း ပုရိသတွေရဲ့ အားပေး ဝန်းရံခြင်းတွေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်…
မောျဒယျမေ လး ခငျလှှမျး ကတော့ တောင့ျတငျးတဲ့ ခန်ဓာကိုအလှတရားတှနေဲ့အတူ သေးသှယျတဲ့ခါးနဲ့ လုံးဝနျးကွီးမားလှတဲ့ တငျသားဆိုငျတှကေိုပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ကောငျမလေးဖွဈပွီး အထူးသဖွင့ျ သူမရဲ့ တငျသားတှကေ ပုရိသတှေ ကွားမှာ အထူးရပေနျးစားလှပါတယျနောျ…
အနုပညာလောကထဲကို စတင် ဝင်ရောက်လာချိန်ကနေ ယနေ့အချိန်ထိ ပုရိသတွေရဲ့ အခိုင်အမာ အားပေးဝန်းရံခြင်းကိုခံနေရတဲ့ ကချင်မော်ဒယ်မလေးတစ်ယေညက်ဖြစ်ပြီး။Single Mom ဘဝနဲ့ ရပ်တည်ကာ သမီးလေးကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေပေမယ် ခေးကြီးလုကိုတော့ အသေရရ အရှင်ရရ ချူချင်သူတွေ ဝိုင်းနေလောက်အောင် တောင့်တင်းဖြောင့်စင်းတဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှကြီးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက် ပုရိသတွေရဲ့ အသည်းကျော် ခေးကြီးဖြစ်နေတာပါ….
မော်ဒယ်မလေး စုလှိုင်ဝ င်းကိုတော့ ပရိတ် သတ်ကြီး သိရှိပြီူသားဖြစ်မှာပါနော်။အထူးသဖြင့် သူမရဲ့ TikTok လေးတွေက ပုရိသတွေကြားမှာအထူးရေပန်းစားလှပြီး သူမရဲ့ ကြီးမားလှတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကြောင့် ပုရိသတွေရဲ့ အိမ်မက်ထဲက နတ်သမီးလေးဖြစ်နေမှာတော့ အသေချာပါပဲနော်…
ပရိတျသတျကွီးရေ မငျးသမီးေ ခြာလေး အိခြောပိုကတော့ ပရိတျသတျကွီးနဲ့ အထူးမိတျဆကျပေးေ နစရာမလိုလော ကျအောငျကို သိရှိပွီးသားဖွဈမှာပါနောျ။ လကျရှိခြိနျမှာ အောငျမွငျကြောျကွားတဲ့ မငျးသမီးလေးတဈလကျဖွဈနပွေီး သူမရဲ့ ရူးသှပျစှဲလနျးဖှယျရာ ကောကျကွောငျးအ လှတှကေတော့ ပုရိသတှရေဲ့ စကားဝိုငျးမှာ မပါမဖွဈနရော ယူထားတာပဲဖဈပါတယျနောျ…
မငျးသမီးခြောေ လးဝါဆိုမိုးဦးကတော့ မောျဒယျ လောကမှာအောငျမွငျနပွေီး လကျရှိအ ခြိနျထိလညျး အနုပညာအလုပျတှေ ကိုလုပျကိုငျနကော စှဲမကျဖှယျရာ ညှို့ခကြျပွငျးတဲ့ကော ငျးကွောငျးအလှတှကေို ပိုငျဆိုငျထားပွီး မွငျသူတိုငျးက ငေးရလောကျအောငျ ပွပွေဈတဲ့ ကောကျကွောငျးတှကွေောင့ျလညျး ပုရိသတှရေဲ့ အထူးဝနျးရံမှုတှကေို ပိုငျဆိုငျထားတာပဲ ဖွဈပါတယျနောျ….
ပရိတ်သတ်ြ ကီသရေ ဒီစာရင်း ရဲ့ နံပါတ်တစ်နေ ရာကို ရယူထားသူကနော့ ပုရိသတွေရဲ့ အချစ်တော် မအေးသောင်းပဲဖြစ် ပါတယ်နော်။ မအေးသောင်းကတော့ သူမရဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှတွေနဲ့ စွဲမက်ဖွယ် အလှတရားတွေကို မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ ဖော်ပြလေ့ရှိပြီး တကယ့်ကို ရှိုက်ဖိုကြီးငယ် အသွယ်သွယ်နဲ့ ပုရိသတွေရဲ့ အိမ်မက်နတ်သ မီးတွေထဲက တစ်ယေညက် အဖြစ်အမြဲပါနေမယ် ဆိုတာတော့ အသေချာပါပဲနော်….
ချစ်ရတဲ့ပရိတ်သ တ်ကြီးရေ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Cele တွေထဲက အကိတ်ဆုံး အတောင့်အဖြော င့်ဆုံး Cele မတ်မတ် (၁၀)ဦးကို ဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ ပရိတ်သတ် ကြီးအနေနဲ့ သိရှိတဲ့ အကိတ်ဆုံး Cele တွေရှိရင် လည်းပုံလေးတွေနဲ့ တကွ Comment မှာ ဖော်ပြခဲ့ကြပါဦးနော်…Crd